Edson - Inhliziyo Yami, Induku Yombani - Ukubalwa KweMbuso
Saint Joseph uku	U-Edson Glauber ngo-Okthoba 27, 2020:
Ukuthula kube senhliziyweni yakho! Ndodana yami, ngivela eZulwini neNdodana yami uJesu ukuzobusisa sonke isintu: ubuntu obukhohliwe uNkulunkulu futhi obungasamthandi. UNkulunkulu ukubizela ekuphendukeni, kepha abaningi abafuni ukumuzwa. Abaningi bayenqaba ukwamukela uthando lukaNkulunkulu, bezivumela ukuba baphuphuthekiswe nguSathane, obavimba endleleni yaKhe engcwele ukuze balandele izinkohliso nezono zomhlaba. Ndodana yami, tshela wonke umuntu ukuba asondele enhlizweni yami emsulwa kakhulu. Inhliziyo Yami iyoba yinduku yombani emelene nobulungiswa bukaNkulunkulu ezowa ngamandla kwizoni ezingabongi. Inhliziyo Yami izokuvikela ezikhathini ezinzima kakhulu ezizokwenzelwa iSonto nezwe kungekudala. Abantu abangalaleli bazohlupheka kakhulu ngenxa yokuba izithulu kwabo ngokungalaleli lokho uNkulunkulu akushoyo kubo. UNkulunkulu akakuthandi ukungalaleli. UNkulunkulu akasithandi isono. Shintsha izimpilo zakho, ngoba kungekudala iSonto Elingcwele lizolimala ngendlela enesihluku futhi ukuphelelwa yithemba kwabampofu, abalahliwe nabalimele umhlambi kuzoba kukhulu. Thandaza, thandaza, thandaza kakhulu futhi uNkulunkulu uzoba nomusa kulowo nalowo kini nasemhlabeni wonke. Ngiyanibusisa nonke: egameni likaYise, neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen!
Funda ukuthi kungani lokhu kuyi- Isikhathi seSt. Joseph nomthandazo okhethekile wokuzinikela kuye ku IZwi Manje.
Posted in U-Edson noMaria, Imilayezo, Ukuvikelwa Ngokomoya.
← UPedro - Impi Enkulu
I-Valeria - Isikhathi Sesifikile →